भारतले थप तीनवटा हवाई मार्ग उपलब्ध गराउने - Namasteholland, News, Information and Technology
२ असार २०७५, शनिबार १९:५८0464
काठमाडौं– भारत नेपाललाई थप चार हवाई मार्ग उपलब्ध गराउन सहमत भएको छ । उडान सुरक्षाको अध्ययनपछि भारत जनकपुर, विरानगर र महेन्द्रनगरबाट पनि दुईतर्फी एयर रुट दिन सहमत भएको हो।
गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका लागि सहज मानिएको भैरहवा हवाई रुटमा भारत अझै सहमत भएको छैन।
रुटका लागि नागरिक उड्ययन प्राधिकरण र एयरपोर्ट अथोरिटी अफ इन्डियाबीच नयाँ हवाई रुटसम्बन्धी सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर भएको छ ।
नेपाल र भारतबीच थप हवाई मार्ग उपलब्ध गराउने विषयमा भएको द्विपक्षीय छलफलमा सहमति भए पनि केही विषयमा भने अध्ययन जरुरी देखिएको बैठकपछि जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
प्राधिकरणका प्रवक्ता वीरेन्द्र श्रेष्ठले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उडान सुरक्षालगायतका विषयमा थप अध्ययन गरी नयाँ हवाई मार्ग उपलब्ध गराउन भारतीय अधिकारी सहमत भएको उल्लेख छ ।
गत जेठ ३१ देखि शुरु भएको द्विपक्षीय वार्ता एक दिन लम्बिएर शनिबार सम्पन्न भएको हो । द्विपक्षीय छलफलमा भारतीय अधिकारीले जनकपुर– पटनाबीचको एकतर्फी हवाई मार्गलाई दुई तर्फी बनाउन सहमत भएका छन् । तर उडान सुरक्षा मूल्यांकन गरी सो को आधारमा मात्रै नयाँ मार्ग लागू गरिने भएको छ ।
१९ श्रावण २०७६, आईतवार ०९:१६0402
६ जेष्ठ २०७६, सोमबार ०८:४२0734
१८ फाल्गुन २०७५, शनिबार १०:१७0440
Hey Buddy!, I found this information for you: "भारतले थप तीनवटा हवाई मार्ग उपलब्ध गराउने". Here is the website link: https://www.namasteholland.com/%e0%a4%ad%e0%a4%be%e0%a4%b0%e0%a4%a4%e0%a4%b2%e0%a5%87-%e0%a4%a5%e0%a4%aa-%e0%a4%a4%e0%a5%80%e0%a4%a8%e0%a4%b5%e0%a4%9f%e0%a4%be-%e0%a4%b9%e0%a4%b5%e0%a4%be%e0%a4%88-%e0%a4%ae%e0%a4%be%e0%a4%b0/. Thank you.